'ब्रम्हनालमा नपुग्दासम्म सत्ता नछोड्ने मनोवृत्ति अत्यन्त घातक, आत्मकेन्द्रीत र आत्मचिन्तनले ग्रस्त राजतन्त्रात्मक मनोवृत्ति हो' | Ratopati
'ब्रम्हनालमा नपुग्दासम्म सत्ता नछोड्ने मनोवृत्ति अत्यन्त घातक, आत्मकेन्द्रीत र आत्मचिन्तनले ग्रस्त राजतन्त्रात्मक मनोवृत्ति हो'
एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भने हामीलाई सहयोग चाहिएन : झलनाथ खनाल
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeपुस ११, २०७६ chat_bubble_outline2
नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग पार्टी राजनीति एवं समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरुम केन्द्रीत रहेर रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ .
हरेक कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन भनेको उसमा कमिटी पद्दति छ कि छैन?उसले सामुहिक नेतृत्व प्रणाली सञ्चालन गर्न सकेको छ कि छैन?पार्टीको आन्तरिक जीवन परिचालित हुन सकिरहेको छ कि छैन?यी आधारभूत कुराहरु हुन् । यी कुराहरु भयो भने पार्टीको ज्यान हुन्छ । ती कुराहरु भएनन् भने पार्टीको ज्यान हुँदैन ।
दुर्भाग्यवश त्यो देखिँदैन....
दुईटा व्यक्तिले गरेका निर्णयहरुले पार्टीले ठूलो समस्या भोग्नुपर्‍यो । एकातिर पार्टी विघठन गरियो,त्यसले भयंकर ठूलो क्षति भएको छ । त्यो क्षतिको सारा जिम्मेवारी दुईटा नेताहरुले लिनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
अहिले सिंगो संसारको ट्रेन्ड भनेको अब विकास र निर्माणको केन्द्रबिन्दू पूर्वतिर,सर्दै गइरहेको छ र एशिया विश्वविकासको केन्द्र बनेको छ । त्यो केन्द्रविन्दू बन्ने क्रममा अहिलेको विश्वको शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि बदलिँदैछ ।
चीनले विश्वका कुनै पनि कुनामा सैन्य अखडा खडा गर्ने र साम्राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छैन । चीनको उदयसँगसँगै नेपाल समेतले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने आधारहरु र मित्रहरु पाइरहेको जस्तो हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौं ।
पश्चिमा जगत् अलि बढी मात्रामा छट्पटिएको चाहिँ छ । त्यही सिलसिलामा खासगरी अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीति अघि सारेको छ । त्यो के हो भनेर उसले राम्रोसँग परिभाषित गर्न पनि सकेको छैन । तर फलाना देशहरु यसमा छ,फलाना देशहरुलाई हामीले सहयोग गरेका छौं भनेर उसले लेखिरहेको छ तर ती देशहरु स्वयं पनि त्यो मामिलामा विश्वस्त छैनन् ।
एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भने हामीलाई कुनैप्रकारको सहयोग चाहिएन,लिँदैनौं । त एमसीसी स्वतन्त्र र अलग कुरा हो र यो द्विपक्षीय सम्बन्धका सिलसिलामा विकसित भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यो सहयोग लिन कुनै आपत्ति हुँदैन ।
वीआरआई र इण्डोप्यासिफिकलाई एक अर्काको टक्करमा आइरहेको प्रक्रियाको रुपमा हामीले ठान्नै हुँदैन । वीआरआई सैन्य वा प्रभावको घेरा बढाउने परियोजना होइन ।
संविधानले राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले चल्ने सीमा तोकिदिएको छ । सबैले संविधानलाई पालनागर्‍योभने अरु समस्या आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
जहाँसम्म यो बीचमा विभिन्न भेटघाटका कुराहरु छन्, राष्ट्रपतिले आफूलाई लागेका कुनै पनि विषयमा कुनै पनि व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्न पाइन्छ । यो कुरालाई आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । जो राष्ट्रपति भए पनि यस्ता कुरा हुन सक्छन् ।
मलाई जुन प्रश्नहरु सार्वजनिक रुपमा गरिरहनु भएको छ,यस्ता प्रश्न नै राष्ट्रपतिलाई आफ्ना काम,क्रियाकलापहरुका बारेमा दिग्दर्शन गर्न,हेर्न,विचार गर्न पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
त्यसकारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै पनि ओहोदामा बसेको हरेक व्यक्तिले आफ्नो काम गर्ने सीमालाई संविधानले मार्गदर्शन, दिग्दर्शन अनुरुप स्वीकार गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक भएको अवस्थामा हुन्छ । उसले त्यो अभिभावकको भूमिकामै आफूलाई केन्द्रित गर्‍योभने राम्रो हुन्छ ।
पार्टीपिच्छे संगठन खोल्ने काम भयो । त्यो क्रम अहिलेसम्म यथावत छ । यो यथावत हुनु भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई व्यापक रुपले राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिक आधारमा विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसकारण पनि सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन ।
नमानेपछि पार्टीपिच्छे संगठन खोल्ने काम भयो । त्यो क्रम अहिलेसम्म यथावत छ । यो यथावत हुनु भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई व्यापक रुपले राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिक आधारमा विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसकारण पनि सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन ।
यस मामिलामा सबै दलहरु ‘वास्तवमा कर्मचारीहरुलाई एउटा संगठन भए पुग्छ, दलपिच्छे संगठन निर्माण गर्न दिनु हुँदैन’ भनेर नयाँ सोचका साथ जाने र कर्मचारीलाई व्यावसायिक बनाउने, उनीहरुलाई राज्य संयन्त्रको स्थायी सरकारका रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने, पार्टी सेवक नभएर राष्ट्र सेवकका रुपमा काम गर्न सक्ने बनाउने हो भनेमात्र सुशासन कायम हुन सक्छ । यस दिशामा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसका लागि त कर्मचारीतन्त्रलाई नीति–नियमभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै काम गर भन्यौँ भने नटेर्नु भनेर आदेश दिन सक्नु पर्‍यो, होइन ?
हो, निसन्देह त्यही नै हो । त्यही ढङ्गका ऐनहरु बनाउनु पर्‍यो । कानुनहरु पनि बनाउनु पर्‍यो । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था राम्रो ढङ्गले गर्ने । उनीहरुको तलव तथा सेवा सुविधा पनि त्यही ढङ्गले निर्धारण गर्नुपर्‍यो । उपयुक्त हिसावले तलव दिनु पर्छ । काममा पनि सरकारले खटाइसकेपछि ‘म त्यहाँ जान्न’ भन्न पाइँदैन ।
कर्मचारीको सरुवामा पनि नेताको धुरी घुम्नेहरुले पायक र राम्रो मानिएका ठाउँमा अवसर पाउने,सोझो हिसाबले काम गर्नेहरुलाई जहिले पनि अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो पनि त आउँछ,होइन?
हो, यो पनि अत्यन्त गलत प्रणाली हो । तपाईले भनेजस्तो कुराहरु एक हदसम्म छ । यो गलत कुरा हो, यसलाई अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ । सरुवाको निम्ति पनि एउटा प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ ।
कोही सधैँ सुगम जिल्लाहरुमा बसिरहने, कोही दुर्गममै बसिरहने अवस्था छ, यस्तो अवस्थालाई तोड्नुपर्छ । जोसुकैले पनि एकपटक दुर्गममा पुग्ने, एक पटक सुगममा आउने खालको चक्रीय प्रणालीअनुसार सरुवा हुने प्रणाली विकास गर्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ ।
अब संविधानको मार्यदर्शनअनुसार पार्टीहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीहरु पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् र अझै यिनीहरु परिपक्व बिन्दुमा पुगिसकेका छैनन् । परिपक्व बिन्दुमा पुग्नका लागि समय लाग्छ।
नेतृत्व पंक्तिबाट यो गुटबन्दीको माहारोगका विरुद्ध जुध्नुपर्ने हुन्छ । गुटहरु समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ । र पार्टीका कार्यदिशा,नीति र सिद्धान्तका आधारमा सवै चल्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीका कार्यक्रमलाई सर्वोपरी ठान्ने, पार्टीका लक्ष्यलाई सर्वोपरी ठान्ने भावनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी भावना जतिमात्रामा विकास गर्न सक्छौ, त्यति नै गुटीय भावना समाप्त हुन्छन् । निम्न पुँजीवादी भावनाको उपज गुटबन्दीबाट जति नेताहरु मुक्त हुन्छन्, त्यति नै पार्टी पनि मुक्त हुनसक्छ ।
बुढापाकाहरु जो हुँदै जान्छन् उनीहरुको काम सस्मरण लेख्ने हो,अरुलाई शिक्षित गर्ने हो । अरुको अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्ने हो । तर ब्रम्हनालमा नपुग्दासम्म सत्ता नछोड्ने जुन खालको मनोवृत्ति अत्यन्त घातक,आत्मकेन्द्रीत र आत्मचिन्तनले ग्रस्त मनोवृत्ति हो ।
२०६२, ०६३ पछि हाम्रो समग्र देश नै समाजवादी क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको युगमा आइपुग्यो । यसकारणले अबहाम्रो क्रान्तिको चरित्र पनि बदलियो,कार्यक्रमको चरित्र पनि बदलियो।अबको कार्यक्रम भनेकोसमाजवादी कार्यक्रमहो।
अहिलेको समाज भनेको प्रारम्भिकपुँजीवादी समाज हो । योपुँजीवादी समाजलाई कसरी समाजवादी समाजमा रुपान्तरण गर्ने?त्यो एउटा ठुलो प्रश्न हामीसामु छ ।
अहिले नेपाली समाजमा दलालपुँजीवादहावी छ । हामीले सामन्तवाद उन्मुलन गर्यौंतर दलालपुँजीवाद हावी नै छ । यो दलालपुँजीवादलाई विस्तारै विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै हामीले राष्ट्रियपुँजीको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले पनि हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो । यो देशको कृषिलाई आधुनिकीकरण, सामुहिकीकरण, सहकारीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अर्थतन्त्रको जगलाई नै समून्नत बनाएर लानुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो कुरा भनेको हामीले उद्योगहरु स्थापना गर्दाखेरि तीनखम्बे अर्थतन्त्रको नीतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले राजकीय क्षेत्रलाई पनि व्यापक बनाउदै लानुपर्छ । त्यसैगरी सहकारीको क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई अहिले हामीले उन्मुलन गर्न सक्दैनौं, गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले साथमा लिएर, सहुलियत दिएर राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु विकास गर्ने काममा मद्दत गर्नुपर्छ । यस्तो मद्दत गर्ने नीति लिएर जानुपर्छ ।
त्यसैगरी सबैलाई शिक्षा उपलव्ध गराउने ढंगले जानुपर्ने हुन्छ । कमसेकम पनि माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा उपलव्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । उच्च शिक्षालाई राम्रो सहुलियत र सुविधामा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक बनाउदै लानुपर्ने हुन्छ र मुलुकको विकासका निम्ती आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि राम्रो हेल्थ केयर सिस्टम । जनमुखि हेल्थ केयर सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रमा पनि निजी र राजकीय दुवै क्षेत्रलाई विकास गरेर लैजानुपर्छ । सञ्चार नीति त्यही ढंगको हुनुपर्छ । सम्पूर्ण जनतालाई सुचना उपलव्ध गराउन सकिने किसिमको हुनुपर्छ । त्यसैगरी वन तथा वाताबरण संरक्षण गर्ने नीति पनि त्यस्तै लिएर जानुपर्ने हुन्छ । विदेश नीति असंलग्न र शान्तिको विदेश नीति हामीले अपनाउनुपर्छ ।
यी कुराहरुको आधारबाट अघि बढेमात्रै हामी समाजवादको दिशातर्फ जान सक्छौ ।
समाजवाद हुदै साम्यवादको कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भन्ने तपाइको भनाइरह्यो । तर अहिले नेपालको आन्तरिक समस्या बनेको विप्लव समुहसँग निर्णयमा पुग्नेगरी वार्ताको तयारी भएको देखिँदैन एकातर्फ भने अर्कोतर्फ समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सत्ता समट्करण पनि बदलिने संकेतलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
पहिलो कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोलबद्ध गर्ने कुरामा हामीले सही कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रम र रणनीतिका आधारमा एकता मजवुत गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । हामीले पछिल्लो कालमा पूर्व नेकपा माओवादी र एमालेलाई एकताबद्ध गर्यौं । यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुलभुत रुपमा एकतावद्ध गरेका छौं । तर अझैपनि कतिपय प्रवृत्तिहरु, मनोवृत्तिहरु यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान छन् र ती मनोवृत्तिहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साना मसिना गुटहरु पनि छन् । त्यो मध्येको एक विप्लव समुह पनि हो । विप्लव समुहले अहिले जुन ढंगले हतियार उठाउने, सशस्त्र संघर्षको दिशातर्फ अघि बढ्ने खालका कुराहरु गर्न खोजिरहेको छ, त्यो आधारभूत रुपमा पनि गलत छ । त्यो अहिलेको संविधानअनुसार पनि मिल्दैन । मुलुकको आवश्यक्ताअनुसार पनि मिल्दैन । मुलुकको ऐतिहासिक विकासक्रम अन्तर्गत पनि यो मिल्दैन । त्यसैले म उहाँहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने आउनुस्, वार्तामा बस्नुस् । छलफल गर्नुस्, हामी छलफल गरौं र अगाडि बढ्ने अग्रगामी दिशातर्फ जाने साझा मार्ग पहिल्याऔं ।
सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट अव सम्भव छैन । अव देश अगाडि बढिसक्यो । त्यसो हुनाले शान्तिपुर्ण बाटो अपनाएर अगाडि जाने बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट अव सम्भव छैन । अव देश अगाडि बढिसक्यो । त्यसो हुनाले शान्तिपुर्ण बाटो अपनाएर अगाडि जाने बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अव उहाँहरुले हिसात्मक बाटो नै रोजिरहनुभयो भने सरकारले पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले टकराव पनि ल्याउन सक्छ । त्यो टकराव नआओस् भन्नेतर्फ विप्लव समुहले पनि ध्यान दिनुपर्छ र सरकारले पनि ।
दुवै पक्षले वार्ताको कुरा गरेपनि त्यसका लागि खासै गृहकार्य गरेको पाइदैन जसले गर्दा यो समस्या त्यति छिटै र सजिलै समाधान हुने संकेत देखिदैन नि?
सरकार सोझै तयार नभएपनि वार्ताका लागि आव्हान गरेको सरकारका व्यक्तिहरुले पटकपटक भनिरहेका छन् । त्यो मैले पनि सुनिरहेको छु । गृहमन्त्रीले त सदनमै पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ । यसले वार्ताको लागि सरकार तयार नभएको भन्ने कुरा होइन । तयार छ । त्यसका लागि विप्लव समुह गम्भीर भएर वार्तामा आउनुपर्‍यो, त्यसरी आउने हो भने हामी जहिले पनि तयार छौ । मैले पनि सम्बन्धित सुत्रहरुलाई वार्तामा आउनुस् छलफल गरौं शान्तिपूर्ण माध्यमबाट निकास निकालौं भनेको छु । यो कुरा फेरि पनि म तपाईंहरुको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट भन्न चाहान्छु– विप्लव समुहका सवै साथीहरु, हिंसात्मक बाटोबाट देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ लान सकिदैन । हामी एकआपसमा वार्ता गरौं र साझा निश्कर्ष निकालौं ।
तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका साथीभाईहरुसँग यो सरकारको संलग्नता रहिनैरहेको छ । त्यो कुरालाई निरन्तरता दिने कुरालाई पनि सरकारले सोचिरहेको नै छ । बाँकी कुराहरु अलिअलि तलमाथि र देव्रे दाहिने भइरहन्छन् ।
तस्विर तथा भिडियो : कृष्ण खड्का
Dec. 28, 2019, 1:31 p.m. Kalu Ram
Ye patmurkha, Bhutan , Japan Ra europeli monarchy bare Pani study gar
Dec. 27, 2019, 4:35 p.m. Narayan
कसैको आषा बाँकी रहेन, किनकी झलनाथजी तथा माधबजी सो शिखरको स्थाद लिएका तर सिन्को नभाँचेका ब्यक्ति हुन् ।